သက်ဝေ: ၂၀၀၈ မှတ်တမ်း
အချိန်တွေကုန်တာ မြန်လွန်းလှသည်။ နောင်ထပ် ရက်အနဲငယ်ကြာရင် ၂၀၀၉ ဟူသော နှစ်သစ် တခုကိုရောက်တော့မည်။ ကုန်လွန်ခဲ့သော ၂၀၀၈ အကြောင်ကိုးပြန်တွေးကြည့်တော့လဲ ဘာမှ သိပ်မယ်မယ်ရရ မရှိလှ…။
မှတ်မိသမျှ ပြောရရင်… တပါတ်မှာ ငါးရက် အလုပ်လုပ်၍ နှစ်ရက် နားရသည်။ အလုပ်ထဲမှာလဲ သိပ်မဆိုးလှ…။ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် တရုပ်၊ မလေး၊ မြန်မာ တွေနဲ့အဆင်ပြေသည်။ ကိုယ့်အထက်က လူကြီးတွေနှင့်လဲ ဆက်ဆံရေး အဆင်ပြေသည်။ လခ တစ်ခါတိုးပြီးပြီ။ ဒီလောက်ဆိုရင် တော်ပြီပေါ့…။
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ပရိုဂျက် အသစ် များများစားစားမရှိလှ…။ ထို့ ကြောင့် နဲနဲ အသက်ရှု ချောင်နေသည်။ အခု ဒီဇင်ဘာလကုန်တွင် ရမည့် ပုံမှန်လခ နှင့် နောက်ထပ် တစ်လစာ ဘောနပ်စ်ကို မျှော်လင့်နေသည်။ အခုတလော ကမ္ဘာမှာ စီးပွားက ပျက်စပြုနေသည်ဟု ကြားကြားနေရသောကြောင့် ဒီနှစ်အဖို့ဘောနပ်စ် ရမှရပါတော့မလားဟု ပူသူတွေလဲရှိ…။ နောင်နှစ်မှာ မိန်းမယူရန် ပိုက်ပိုက်စုနေသူများကလဲ ထိုဘောနပ်စ်ကို မျှော်လင့်နေကြသည်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ရလျှင်တော့ ပျော်စရာပေါ့…။ ရရင်တော့ နှစ်သစ်နှင့် တရုပ်နှစ်ကူးတွင် ရှော့ပင်တွေ ခဏခဏ ထွက်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။
နားရသည့် စနေ တနင်္ဂနွေ နှစ်ရက်မှာ အိမ်သန့် ရှင်းရေးလုပ်၊ ဈေးဝယ်၊ ချက်ပြုတ်၊ လျှော်ဖွပ် မီးပူတိုက်ရတာနဲ့ တင် တစ်ရက် ကုန်သွားသည်။ ကျန်တဲ့ တစ်ရက်မှာတော့ အောချတ်လေး၊ စီးတီးဟောလေး ဘယ်လေး ညာလေး သွားရင်သွား…။ ရုပ်ရှင် ကြည့်တဲ့အခါကြည့်…။ မဟုတ်ရင် ဟိုက ဒီက ဖိတ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အိမ်မှာ သွားစားကြသည်။ အိမ်မှာ စုတဲ့အခါ စုကြသည်။ မြန်မာစာ စစ်စစ်လေးများ ချက်ပြုတ်စားကြသည်။ ထိုအခါ ပိတ်ရက် နှစ်ရက်က တကယ်ကို မ၀ မလင်…။ တခါတရံ ကြာသာပတေးလို ပိတ်ရက်များမှာ သောကြာနေ့ခွင့်ယူပြီး စနေ တနင်္ဂနွေ နှင့် ဆက်နားလိုက်သည်။ ဘာမှ သိပ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မဖြစ်သော်လည်း ဆေးခွင့်ကို တစ်လ တစ်ခါလောက်တော့ ယူဖြစ်သည်။ မဟုတ်ရင် ဆေးခွင့်တွေ ပိုနေမှဖြင့် နှမြောစရာ…။
နောက်နှစ် ၂၀၀၉ မှာတော့ ပိတ်ရက်တွေက ဆက်နေကြသည်။ အီးမေးလ်မှ ရထားသော ၂၀၀၉ အတွက် ပိတ်ရက် (စင်္ကာပူ) ပြက္ခဒိန်ကို သတင်းအဖြစ် ဝေမျှပေးလိုက်သည်။
အနီရောင်ဖြင့် ပြထားသောရက်မှာ အစိုးရ ရုံးပိတ်ရက်၊ အ၀ါရောင်မှာ စနေ တနင်္ဂနွေ နေ့ များ၊ အပြာရောင်မှာ ခွင့်ယူသင့်သော နေ့ ရက်များ။ ထိုရက်များတွင် ခွင့်ယူပါက အသင် ရနိုင်သည့် ဟောလီးဒေး ရက်ရှည်များ ကိုတွေ့ ရမည် ဖြစ်သည်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းကို နှစ်သက်တတ်သူများအတွက် အလွန်ကောင်းသော ပြက္ခဒိန်ပင်…။ ဟိုတစ်ရက်က ရုံးမှ အထက်လူကြီးကို ထိုပြက္ခဒိန်ကိုသွားပြကာ ၂၀၀၉ အတွက် ထိုအပြာရောင်နေ့ ရက်များကို အခုထဲက ကြိုပြီး ခွင့်တင်ထားချင်ပါသည်ဟု ရှည်ရှည်ကဲကဲ ပြောလိုက်မိသဖြင့် မျက်လုံးပြူးဖြင့် ပြန်ကြည့်ခြင်းခံရသည်။ (သူ့မျက်လုံးက နဂိုထဲက နဲနဲတော့ပြူးပါသည်။)
ပုံထဲတွင် Source : Ministry of Manpower ဟု အထင်အရှား ရေးသားထားသောကြောင့် ဘာပြဿနာမှတော့ မဖြစ်တန်ရာ…။ အခုတလော ဟိုကိစ္စ ဒီကိစ္စတွေက အတော် ရှုပ်ထွေးနေသောကြောင့် ဓါတ်ပုံတင်ဖို့ ရာ တော်တော်သတိထားနေရသည်…။
ဒီနှစ် ၂၀၀၈ မှာတော့ မြန်မာပြည်ကို မပြန်ဖြစ်လိုက်…။ ၂၀၀၉ မှာတော့ ပြန်ဖြစ်အောင် ပြန်မည်ဟု စိတ်ကူးထားသည်။ ခုထဲက ပိုက်ဆံကြိုစုထားမည် ဟုလဲ စဉ်းစားထားသေးသည်။ ဘယ်လောက် စုဖြစ်မည်ကိုတော့ မသိ…။
၂၀၀၈ ထဲမှာ ဘာကုသိုလ် ကောင်းမှုတွေ ပြုထားသလဲ ဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေး၊ ပြန်တွေး ကြည့်နေမိသေးသည်။ များများစားစား ပြောစရာဆိုလို့ရန်ကုန်က ရှင်သာမဏေကျော် စာပြန်ပွဲအတွက် စလုံး ၂၀၀၊ ကိုယ်နေခဲ့သော အထက်တန်းကျောင်းမှ အာစရိယ ပူဇော်ပွဲအတွက် ၁၅၀၊ နာဂစ် အတွက် ၂၀၀ လှုခဲ့သည်။ ပြီးတော့ နာဂစ်မှာ မိဘမဲ့သွားသော ကလေးငယ်များ၏ ပညာရေးအတွက် (ရွှေည၀ါ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ပညာရေး) မူလတန်း ကလေး နှစ်ယောက်နှင့် အလယ်တန်း ကလေး တစ်ယောက်ကို လှမ်းမွေးစားထားသည်။ လစဉ်ပုံမှန် စလုံး ၄၅ ကျပ် လှုရသည်။ ထိုကလေးလေးတွေက သူတို့ ရဲ့ဓါတ်ပုံလေးတွေနဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င် အကျဉ်းလေးတွေပါတဲ့ စာရွက်လေးတွေ ပို့ ပေးကြသည်။ သနပ်ခါး ပါးကွက်ကြား ဓါတ်ပုံလေးတွေနဲ့ပဲပင်ပေါက်လို လက်ရေး ကွေးကွေး လိမ်လိမ်လေးတွေက တကယ်ကို ဂရုဏာသက်စရာ..။ ပြန်ကြည့်မိတိုင်း ကြည်နူးစရာ…။
နောက် ဘာရှိသေးလဲ…။ အော်… သတိရတာ တစ်ခုရှိသေးသည်။ ရန်ကုန်မှ ဘုန်းတော်ကြီးတပါး ဒီမှာ ဆေးကုသရန် ကြွလာစဉ်က န၀ကမ္မ ၀တ္ထု အလှုငွေ ၂၀၀ လှုခဲ့သေးသည်။ ဒါနဲ့ မေ့တော့မလို့ … ဒီမှာ လစဉ်လတိုင်း မပျက်မကွက် လှုရတာ တစ်ခုလဲ ရှိနေသေးသည်…။ အဲဒီကိုတော့ ၄ လ (သို့ ) ၆ လ တစ်ကြိမ်လောက် မှန်မှန် သွားလှုရသည်။ မဟုတ်လို့တလုံးတခဲထဲ စုထားပြီးမှ လှုရပါက ထိုလအဖို့ထမင်းငတ်သွားနိုင်သည်။
ဒီ ၂၀၀၈ ထဲမှာ နှစ်ဖက်မိဘများ၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမများ၊ ယောင်းမတွေ ယောက်ဖတွေ တစ်စုပြီးတစ်စု လည်လည်လာကြသောကြောင့် ဆွေစုံ မျိုးစုံ တွေ့ရသည်။ ထိုလများတွင် ဘတ်ဂျက် နဲနဲကြပ်သွားသည်မှလွဲ၍ ပျော်စရာကောင်းပါသည်။ ၂၀၀၈ မှာ သူငယ်ချင်းတွေလဲ တော်တော်များများ တွေ့ရသည်။ သူတို့ တွေက ပုံစံ အစုံအလင်ဖြင့် လာကြသည်။ တချို့က အလည်သက်သက်၊ တချို့က အလုပ်ရှာ၊ တချို့ကတော့ ကလေးကျောင်းထား…။ အဆင်ပြေကြသူများလဲရှိ၊ မပြေကြသူများလဲရှိ...။
ဒီနှစ်အတွင်း နှလုံးသားရေးရာကတော့… ပြောရရင် အားလုံးကောင်းပါသည်။
ဒါပေမယ့် ဟိုတပတ်က အိုင်စီရှိုးကို လိုက်ပြဖို့ သူ့ ကို ပူဆာရင်းက စကားပြော အဆင်မပြေလို့စိတ်တို စိတ်ဆိုးရသေးသည်။ အိုင်စီက စလုံးကို တစ်နှစ်မှာ တစ်ခါလာနေကျ၊ လာတိုင်းလဲ ကြည့်ချင်လို့ပူဆာနေကျ၊ ပူဆာတိုင်းလဲ သူက အဲဒီ လူရှုပ်ရှုပ် ဆူဆူညံညံပွဲမျိုးတွေ နဲနဲမှ ၀ါသနာမပါတာမို့ဟိုဟာနဲ့ လှည့်ချော့၊ ဒီဟာနဲ့ လှည့်ချော့၊ ဒီလိုနဲ့ ၃ နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီ။ ဒီနှစ်တော့ ပိုက်ဆံအိပ်တစ်လုံးနှင့် အပေးအယူတည့်ကာ ဒေါသကို လျှော့လိုက်ရသည်…။ အငဲ နဲ့ Rဇာနည်ကို အခွေထဲမှာဘဲ ကြည့်ပါတော့မယ်လေ…။
နောက် မှတ်မှတ်ရရ တစ်ခုကတော့ ၂၀၀၈ ဇန်န၀ါရီလကစလို့ ဘလော့ဂ်လေး တစ်ခုကို တော်တော်လေး (တကယ်တော့ တော်တော်ကြီး) ကြိုးစားပမ်းစား ဖန်တီးထားသည်။ ထိုဘလော့ဂ်လေးကြောင့် သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ အသစ်များ များစွာရခဲ့သည်။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မမြင်ဖူးကြသော်လည်း အနှစ်နှစ် အလလက ခင်မင်ခဲ့သူများပမာ ရင်းနှီးခင်မင် သံယောဇဉ်တွယ်ကြသည်။ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်စရာ…။ ထိုဘလော့ဂ်လေးကြောင့် အိပ်ရေးပျက်ရသည်။ လက်ကိုက်ရသည်။ မျက်စေ့ ကိုက်ရသည်။ တခါတရံ ခေါင်းလဲ ခြောက်ရသေးသည်။ သို့ သော် ဒါလေးကိုဘဲ မက်မက်မောမော တွယ်တာနေသည်။ မနက် မိုးလင်း အိပ်ရာမှ နိုးနိုးချင်း သူ့ ကိုအရင် ဖွင့်ကြည့်ပြီးမှ ကျန်တာတွေ ဆက်လုပ်လို့ ရသည်။ တမျိုးတော့ ထူးဆန်းသား။
နောက်ထပ်တော့ ထူးခြားဖြစ်စဉ် ဘာမှမရှိတော့ပြီ။ ခြုံကြည့်ရလျှင် ကောင်းသောနှစ် တစ်ခုဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်တတ်ဖို့ က အရေးအကြီးဆုံး မဟုတ်ပါလား…။
(ပိုစ့်အသစ် ဘာရေးရမှန်း မသိသောကြောင့် စဉ်းစားလို့ ရသမျှ ရောက်တတ်ရာရာ ရေးချလိုက်သည်။ လာဖတ်သူများကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။)
Posted by သက်ဝေ at 1:20 PM
sin dan lar December 11, 2008 at 2:09 PM
၄-၅ လတစ်ကြိမ်သွားမလှူရင် ..ဒါလည်း အလှူစာရင်းထဲထည့်ထားတာလား...:P:P
ThuHninSee December 11, 2008 at 2:20 PM
- December 11, 2008 at 2:48 PM
နောက်ဟောင်းကို ပြန်ကြည့်တော့ အလှူဒါန တွေ တစ်လှေကြီးနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာပါ၊ နှစ်သစ်ကိုလည်း ဆက်ပြီး ကယ်ရီ ယူသွားပါ အုန်းလို့ .. ..
မဇနိ December 11, 2008 at 2:59 PM
အမသက်ဝေ အလှူတွေက စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းလိုက်တာ။ အိုင်စီရှိုးကို ပိုက်ဆံအိတ်နဲ့ လဲလိုက်ရတယ်တဲ့ သနားပါတယ်နော်။ နိနိဆိုရင် မလဲပါဘူး။ ရအောင်ပူဆာမှာပါ။ လိုက်မပို့လို့ကတော့ အချစ်လျော့လို့လားလို့ မေးလိုက်မှာပဲ။ အမရဲ့ ၂၀၀၈ကို ဖတ်ပြီး နိနိလည်း ကိုယ်ဟာကိုယ်ပြန်တွေးလိုက်တော့ တနှစ်လုံး တယောက်ထဲနေခဲ့ရလို့ စိတ်နာသွားတယ်။
JulyDream December 11, 2008 at 3:15 PM
တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်းကို နောက်ပြန် ပြန်ဖတ်ရသလိုပဲ။ အဟက်...
hmoo December 11, 2008 at 3:20 PM
Tha Du..Tha Du..Tha Du
Thax4new post.
Don't work2hard.
Immm,every two or three weeks is Ok..
tg.nwai December 11, 2008 at 5:33 PM
သာဓု သာဓု သာဓု ခေါ်သွားပါတယ် သက်ဝေရေ..
strike December 12, 2008 at 12:21 AM
သာဓု သာဓု သာဓု ခေါ်သွားပါတယ်။
ဆင်ဒဏ်လား လူဒဏ်လား အလုပ်မရှိ၊အကိုင်မရှိတယောက်ကလည်း ဗလာချီကြီးကုသိုလ်ယူ
Moe Cho Thinn December 12, 2008 at 2:01 AM
အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ အလှူလေးတွေလဲ ဆက်လုပ်နိုင်ပါစေ
လာမဲ့ နှစ်သစ်မှာ ကျန်းမာ ပြည့်စုံ ချမ်းမြေ့ တဲ့ ဘ၀ကိုလည်း ဆက်လက် ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ
သီချင်းကြိုက်တတ်လို့ IC ပွဲလဲ ဘာနဲ့မှ မလဲဘဲ အကိုတော်က စိတ်ကြည်ဖြူစွာ လိုက်ပြနိုင်ပါစေ လို့
နောက်နှစ်တွေအတွက် ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ် မမရေ။
တန်ခူး December 12, 2008 at 1:53 PM
သက်ဝေရဲ့ ၂၀၀၈ က မင်္ဂလာရှိသော၂၀၀၈ပါပဲ…
၂၀၀၉သည်လဲ ဒီ့ထက်မက မင်္ဂလာရှိသောနှစ်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော်…
တို့ လဲ နာဂစ်ကမိဘမဲ့သွားတဲ့ ကလေးလေးတယောက်ကို မွေးစားဖြစ်သေးတယ်…
အဖြစ်က တူလိုက်တာ… အားခဲထားတဲ့ IC ခုထိမကြည့်ဖြစ်သေးဘူး… နောင်နှစ်ပေါ့… သက်ဝေက ပိုက်ဆံအိတ်လေးရတာတော်သေး… တို့ ဆို ကြည့်လဲမကြည့်ရ ဘာမှလဲ မရ… ရွှတ်…(ငိုတာ)
နောင်နှစ်က ခရီးထွက်လို့ ကောင်းတဲ့နှစ်နော်… မြန်မာပြည်ပြန်ဖြစ်အောင်ပြန်လိုက်ပါ…
nu-san December 12, 2008 at 10:56 PM
မမသက်ဝေရဲ့ ၂၀၀၈ က အလှူဒါနတွေ အများကြီး လုပ်လိုက်ရလို့ သာဓု ၃ ကြိမ်ခေါ်ပါတယ် အမ။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ကျနော်လည်း ရန်ကုန်ပြန်မယ် အားတင်းထားတယ်.. မပြန်ရတာ ၂ နှစ်ရှိပြီ။ လာမယ့် ၂၀၀၉ လည်း မင်္ဂလာရှိသော နှစ်ဖြစ်ပါစေ အမရေ... IC Show လည်း ကြည့်ရပါစေ.. :D တပတ် ၂ ရက်နားရတာ တကယ် မ၀ဘူးနော်.. အမ (အဟီး.. မရမက အဖော်လိုက်စပ်တာ.. :P)
Nu Thwe December 13, 2008 at 5:33 AM
Self relections for 2008 ပေါ့နော်။ ဒါမျိုးလေးတစ်ပုဒ် နှစ်မကုန်ခင် ရေးရဦးမယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆန်းစစ် အသိအမှတ် ပြုရင်း၊ အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ရှင်သန်ခြင်းကို အားပေးတဲ့ အနေနဲ့လေ။ မသက်ဝေက အတွေးကောင်း အရေးကောင်းပဲ။ ခုမှ သိတာ နောက်ကျနေတယ်။ ကျွန်မဆီ လာလည်ပြီး မှတ်ချက်ရေး၊ ခြေရာချန်သွားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စာတွေ လာဖတ်ဦးပါမယ်။
Enjoy the rest of 2008!
khin oo may December 13, 2008 at 9:59 AM
၁။ သက်ဝေက သိတ်အအရေးကောင်း အတွေးကောင်းတာဘဲ်။ ပြောရင်းနှဲု တို့ဘလော့ မှာ တစ်စုံ တစ်ယောက် လာပြောသွားတာ သတိရတယ်။ kom ဘလော့သည် အများသူငါ ဖတ်ရန် မဟုတ်။ ဘုတ်ကျီးမြှောက် ကျီးဘုတ်မြှောက် ဘလော့ဖြစ်သည်တဲ့။မှန်လိုက်တာ်။
၂။ သက်ဝေ စာ ကိုကြည့်ရင်း ဖတ်ရင်းနဲ့ အေးချမ်းလိုက်တာ။ ချမ်းသာ လိုက်တာ်။ ဘဝကို အဆင်ပြေ အောင်မြင်။ ဘဝကိုလည်း စနစ်တကျ အကွက် ချထားသလိုဘဲ။ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ တို့လိုလည်း စည်းမရှိ ကမ်းမရှိ မနေဘူး။။
၃။ ပိုက်ဆံအိတ်နဲ့ အငဲကိုလဲတာတော့မကောင်းပါဘူး သက်ဝေ။ အငဲ မျက်နှာကို မှမထောက် လုပ်ရက်တယ်။ :P
ြ၎။ ပကဒိန် ကို save လုပ်သွားတယ် ဆိုတာ တော့ အထူးမပြောလိုတော့ဘူး။ ကျေးဇူး kmsl အတွက် အတော် အသုံးဝင်မယ် . သူ သိတ်ဝမ်းသာသွားဘဲ။
၅။ တို့နဲ့ နုသွဲ့နဲ့ အိုင်ဒီယာ တူလိုက်တာ။ တို့လဲ စိတ်ကူးနေတာ။ မတက်ပေမဲ့ ရသွားတဲ့  အိုင်ဒီယာလေးကိုတော့ အသုံးပြူရမှ ဖြစ်မယ် အကြမ်းရေးလိုက်ပြီ။ နောက်တချိန် စိတ်ကူးပေါက် မွမ်းမံပြီး ပြန်ရေးမယ့် စာရေးဆြာမဂျီးပါ။
၆။ စုံ့ထောက်ကြီးမှန်ပ်ါတယ်။ mk ကို မျောက်ကြီး လို့ပြောချင်တာပါ. :P
အောင်သာငယ် December 15, 2008 at 4:56 AM
အငဲနဲ့Rဇာနည်ကို ပိုက်ဆံအိပ်တလုံးနဲ့ Trade-in လုပ်တာ သဘောကျသဗျာ...း)
Merry Christmas & Very Happy New Year!!!!!!!!!!!
သက်ဝေ December 29, 2008 at 2:47 PM
စင်စင် မွန် သိင်္ဂီ Strike နုစံ hmoo...
ကျေးဇူးပါ။ အမျှ သုံးကြိမ်ဝေပါတယ်နော်...။
နိနိ.. စိတ်မနာပါနဲ့ လေ... နောက်နှစ်မှာ ကိုနိနဲ့တူတူနေရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးမယ်လေ.. နော်..
JulyDream... အဟဲ ဂလိုပေါ့ဗျာ...
ချိုသင်း.. တောင်းပေးသွားတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပြီး နောက်နှစ်ခါမှာ အိုင်စီရှိုးကြည့်ရပါစေနော်...
တန်ခူးရေ... ငိုနဲ့ငိုနဲ့ .. မောင့်ကို ၀ယ်ခိုင်းလိုက်လေ...
နုသွဲ့ နဲ့မမခင်ဦး.. အားပေးတာ ကျေးဇူးတင် ၀မ်းသာ...
နောက်ကိုလဲ အများကြီး ရေးအုံးမှာ...
အကိုတို့ယောင်္ကျားတွေ ဒီလိုချည်းပဲလား
TZA January 3, 2009 at 11:48 PM
၂၀၀၈ မှာ သူငယ်ချင်းတွေလဲ တော်တော်များများ တွေ့ ရသည်။ သူတို့ တွေက ပုံစံ အစုံအလင်ဖြင့် လာကြသည်။ တချို့ က အလည်သက်သက်၊ တချို့ က အလုပ်ရှာ၊ တချို့ က ကလေးကျောင်းထား…။ အဆင်ပြေကြသူများလဲရှိ၊ မပြေကြသူများလဲရှိ...။
အတူတူပဲဗျ၊ အဲဒီတချို့တချို့တွေက ကျနော်သိတဲ့ တချို့တချို့တွေများလားလို့တောင် စိတ်ပူမိတယ်၊ ဟားဟား။ ခြုံပြီးပြောလျှင် ကောင်းမကောင်း မသိပါ၊ သို့သော် အသက်ရှူကြပ်ပါလိမ့်မည်၊ ပဲကြီးလှော် ကြိုမစားမိပါစေနှင့်။
Unknown October 7, 2015 at 3:59 PM
How about 2015, sis? I wanna read :D
Unknown October 7, 2015 at 4:02 PM